Never Not Love You ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
Never Not Love You ( 2018 )
2018 မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Never Not Love You ဆိုတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ …
Cast အနေနဲ့ကတော့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ James Reid နှင့် မင်းသမီးချောလေး Nadine Lustre တို့က ပါဝင်ထားပါတယ် ….
ဒီဇာတ်ကားလေးပုံစံကတော့ လူငယ်တွေကြားမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးပါပဲ … အခုခေတ်လူငယ်တွေ ကြိုးစားရုန်းကန်ကြရပုံတွေကို တစ်စိတ်တပိုင်းဖော်ပြထားပြီး အချစ်ရှိရုံနဲ့ အရာရာမပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြထားတာမို့ လူငယ်တွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ …
ဂျီအိုဆိုတဲ့ တက်တူးတွေကြိုက်တတ်တဲ့ graphic designer ကောင်လေးနဲ့ ဂျိုအန်ဆိုတဲ့ မိသားစုကို ကြိုးစားပြီးရှာကျွေးနေတဲ့ကောင်မလေးတို့က မတော်တဆတွေ့ကြရာကနေ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ် …
တစ်နေ့ကျ ဂျီအို ကို လန်ဒန်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အလုပ်လုပ်ဖို့ လာကမ်းလှမ်းတယ် … ဂျီအို က ဂျိုအန်နဲ့မခွဲချင်လို့ အလုပ်ကိုငြင်းပယ်ချင်တယ် … ဂျိုအန်ကတော့ ဒီလိုကောင်းတဲ့အခွင့်ရေးမျိုးကို လက်မလွှတ်စေချင်ဘူး …
ဒါပေမဲ့ နှလုံးသားထက် ဦးနှောက်ကိုပေးပြီး အလုပ်ကိစ္စကြောင့် ခွဲခွာခဲ့ရတယ် … ဒီလိုနဲ့ ၅ နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက် ပြန်တွေ့ကြတဲ့အခါ အတိတ်က အရမ်းချစ်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲသွားကြမလဲ ?? အထူးသဖြင့် LDRS တွေ အနေနဲ့ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါနော် …
Rating အရ IMDb မှာ 7.3/10 အထိ ရရှိထားတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ …
Translator : Htar Ei Hlaing
Actors: Alexis Navarro, Gab Lagman, James Reid, Luis Alandy, Nadine Lustre, Sharmaine Suarez, Yayo Aguila
Soliddrive.co Myanmar844 MB Download Openload.co Myanmar844 MB Download
The Tale of the Affectionate Girl ( 2008 )
Japan ကားလေး တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ ယုကနဲ့ မာကိုတိုတို့ဟာ အထက်တန်းတစ်ကျောင်းထဲ အတူတူတတ်နေကြတဲ့ အခန်းဖော်တွေပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ ယုကအဖေနဲ့ မာကိုတရဲ့ အမေတို့ဟာ လက်ထပ်လိုက်ကြတဲ့နောက် ချက်ချင်းဆိုသလို သူတို့ဟာ မောင်နှမတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ အရင်ကထဲက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချစ်ဇာတ်လမ်းခင်းဖို့လုပ်နေပေမယ့်လည်း အခုတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဆန္ဒတွေကိုယ်စီ ထိန်းချုပ်နေကြရင်း ကြားဝင်လာသူကတော့ မာကိုတိုရဲ့ Guide ဆရာမလေး အီယိုကီပဲဖြစ်ပါတယ်။…
The Palace ( 2013 )
ဒီကားလေးကတော့2013မှာထွက်ရှိထားပြီး မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားချိန်ရှောင်နှင့် ချစ်စရာအပြုံးမျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးတုန်းယွီတို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ ။ဒီကားထဲမှာ မင်းသမီးတုန်းယွီ က နန်းတွင်းသူလေးချိန်ရှန်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မင်းသားချိန်ရှောင်ကတော့ မင်းသား ၁၃ရန်ရှန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ချင်းခေတ်က မင်းသားနဲ့နန်းတွင်းသူလေးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ချိန်ရှန်းဟာ နန်းတွင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါ လျှုံလိဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီး ညီအစ်မတွေလိုဖြစ်ခဲ့တယ် သူတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ နန်းတွင်းသူလျှုံလိက အရမ်းရည်မှန်းချက်ကြီးတယ် မင်းသားတွေနဲ့နီးစပ်ပြီး ဘုရင်မဖြစ်ချင်တဲ့သူ။ချိန်ရှန်းကတော့ ဘ၀ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်း သာမာန်ဘ၀နဲ့ပဲဖြတ်သန်းချင်တဲ့သူ ဒီလိုမတူတဲ့နှစ်ယောက်ဟာ…
One Night Only ( 2016 )
ကဲ…ပရိတ်သတ်ကြီးအားလပ်ရက်မှာအပန်းဖြေကြည့်ရှုဖို့ရာအတွက်One night onlyဆိုတဲ့တရုတ် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားကိုညွှန်းပေးချင်ပါတယ်နော် ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့Romanceကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပေမယ့် ဟာသ အချစ် အလွမ်း အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာ ရသစုံပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ အကျဉ်းချုပ်လေးကတော့**** တရုတ်နိုင်ငံမှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ မိသားစုတစ်ခုရဲ့ အမွေဆက်ခံသူသူဌေးသားလေး ကျိုးရီဟာ လောင်းကစားကို ခုံမင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဘဝမှာ ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲဘူး ဆိုတဲ့စကား အတိုင်း လောင်းကစားလုပ်တာတွေများလာတော့ စည်းစိမ်တွေလဲ…
Heartfall Arises ( 2016 )
Heartfall Arises ( 2016 ) ******************************************************************* ငါးကလေးကားထဲမှာ ဟွားဝူချွဲဆိုပြီး အားလုံးရဲ့အသည်းစွဲ Nicholas Tse ရဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က မှုခင်းကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေနော် ဒီကားထဲမှာဟောင်ကောင်နာမည်ကြီးမင်းသားကြီး Sean Lauက အပြိုင် သရုပ်ဆောင်ပေးထားလို့ ဇာတ်လမ်းက အရမ်းအသက်ဝင်တာနော် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေး နည်းနည်းပြောပြမယ်နော် အခုလို နည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ရောဂါတော်တော်များများကို ကုသလာနိုင်ပြီဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားထင်တယ်…
Black Coal, Thin Ice ( 2014 )
လျှို့ဝှက်သဲဖိုရင်ထိတ်စရာကောင်းတဲ့ကားတွေကိုကြည့်ချင်သူတွေအတွက်……. ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က နာမည်ကြီးပြီး Golden bear award fromBerlinale-Berlin International Film Festival ဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆွတ်ခူးထားခဲ့တဲ့ အရက်စက်ဆုံး လူသတ်သမားကိုဖမ်းကြတဲ့အကြောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးမှာပါနော် သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ ဇာတ်ဆောင်မင်းသားLiao Fanနဲ့ ဇာတ်ဆောင် မင်းသမီး Gwei Lunmei တို့ဖြစ်ပြီး Director Diao Yinan ကပီပီပြင်ပြင် ရိုက်ကူးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ…
Goodbye Summer ( 2019 )
1987: When the Day Comes ( 2017 )
2017ကထွက်ရှိထားပြီး IMDb 8.2/10 , My dramalist 9.1/10ထိရရှိထားတဲ့ တော်လှန်ရေးအကြောင်းရိုက်ပြထားတဲ့Movie ကောင်းလေးပါ 1987 When the days come ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ 1987 ခုနှစ်ရဲ့ တိုက်ရိုက် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချူပ်ရေးကို မလိုလားကြသူများရှိနေပြီး……… အဲ့မလိုလားတဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေအပါအဝင် နိုင်ငံအတွင်းမှာတခြားလျှို့ဝက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ် အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုမကျေနပ်လို့ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြကြရာမှာ ဆိုးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ဦးကို ရဲဘက်က စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရာ လက်လွန်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်အစိုးရဘက်ကနလုံးရပ်ခြင်းကြောင့်သေဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်…
Cheers From Heaven ( 2011 )
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ကျောင်းသားတွေကို သူ ကင်ဆာရောဂါနှင့် သေဆုံးသွားရတဲ့ အထိ ကူညီအားပေးထောက်ပံ့ ပေးခဲ့တဲ့ Hikaru Nakasone အကြောင်းကို ယူ ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်ကားလေးပါ … ပရိတ်သတ်ရဲ့ အသဲကျော် Morisaki Win (အ၀င်း) ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးလဲ ဖြစ်ပါတယ် … လူငယ်တွေ နဲ့ ဂီတ အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး…
The Chocolate Chance ( 2017 )
2017 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ Indonesian Drama Romace Film လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် … ဇာတ်လမ်းနာမည်လေးကလဲ The Chocolate Chance တဲ့ … နာမည်လေးက အဆန်းတော့ အဆန်းသားနော် … ပန်းတွေမှာဆို နှင်းဆီဟာ အချစ်နဲ့တင်စားခံရပြီး … အစားအသောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် ချောကလက်နဲ့ အချစ်ကို တင်စားကြတာ အားလုံးလဲ အသိပါ ……
Trailer: Never Not Love You ( 2018 )